Orinasa volam-panjakana amidy - Efa vonona hampiasaina ny daholobe
Ny fomba haingana sy mora indrindra mankany raiso am-pahibemaso ny orinasanao dia ny mividy a orinasam-bolam-panjakana. Ny orinasam-bolam-panjakana dia orinasam-pifandraisana efa voasoratra anarana ao amin'ny SEC hivarotra ny anjarany amin'ny besinimaro. Manana iray amin'ireo inventories lehibe indrindra amin'ny orinasa talantalana amidy izahay. Azonao atao ny manana ny orinasam-bolam-panjakana na orinasa efa antitra ao anatin'ny 24 ora.
Aorian'ny fividiananao ny iray amin'ireo orinasam-bolam-bolanay dia alefa sy apetraka ny antontan-taratasy fitambarana. Rehefa mampifangaro orinasa tsy miankina amin'ny orinasam-panjakana ianao dia mitazona ny anaran'ny orinasa mbola velona. Ny antontan-taratasinao dia ny endrika ara-dalàna mampifangaro ireo orinasanao roa, mamela anao hanana antokon-dalàna vonona hivarotra ny anjarany amin'ny besinimaro. Ho an'ny fampahalalana sy fanabeazana ihany ny atiny eto. Ny sasany amin'ireo orinasa voatanisa etsy ambany dia mety tsy (mbola) varotra ampahibemaso. Ity pejy ity dia tsy azo heverina ho tolotra hividy na hivarotra fiarovana. Ny fifampiraharahana dia amin'ny alàlan'ny mpisolovava sy brokers manana alalana ihany, araka ny takian'ny lalàna, fa tsy amin'ny alàlan'ny orinasanay. Mitadiava torohevitra ara-dalàna sy ara-dalàna momba ny hetra.